ဝန်ဆောင်မှု - Ningbo Sine သံလိုက် Co. , Ltd မှ
ဖောက်သည် oriented service ကိုထုတ်ကုန်များ၏တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်!
Service ကို Sine ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအယူအဆမခွဲခြားဘဲအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အတူရပ်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဖွစျလိမျ့မညျကိုဘယ်လိုအောင်မြင်သောဆုံးဖြတ်ရန်တံ့သောယုံကြည်ချက်များကပဲ့ထိန်းရမည်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းပေါ်မှာငါတို့စွမ်းဆောင်ရည်စီရင်မည်။
အဆိုပါအရောင်းပေးပို့ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းဖောက်သည်အသိပေးတော်မူမည်
အဆိုပါအရောင်းဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်စျေးကွက်အလားအလာတောင်းဆိုချက်များကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စုစည်းတင်ပြရန်, အခါအားလျော်စွာဖောက်သည်ကျေနပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုစောင့်ရှောက်တော်မူမည်
အဆိုပါအရောင်းပထမကျမ်းစာ၌ရေးထားပုံစံတခါထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုဖောက်သည် '' တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံရရှိနှင့်အတူအရည်အသွေးဦးစီးဌာနမှတုံ့ပြန်ချက်စေမည်။ ထိုအခါအရည်အသွေးဌာန, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစေမှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များကို ယူ. , ခြေရာကောက်ခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်စိစစ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အရောင်းဖို့ရလဒ်များကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအရောင်းသူတို့ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုအတည်ပြုချက်ကိုရယူမှဖောက်သည်များဤ related စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးပို့လိမ့်မည်
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနိုင်ပါသည်: ပင်လယ်ပြင်အားဖြင့်လေတပ်, TNT / DHL / UPS / စသည်တို့ကို Fedex Express ကိုအားဖြင့်
ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းသံလိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံ, စမ်းသပ်ခြင်း, အရည်အသွေးအာမခံချက်ပိုနှစ်ပေါင်းရှိပါတယ်။